दिप्सन लुइटेल काठमाडौं, २१ असार
कोभिड- १९ का कारण विश्व प्रभावित बन्यो । विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रले विश्वव्यापी रूपमा नै घाटा व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसमाथि पनि मनोरञ्जन क्षेत्रले त झनै ठूलो घाटा खेप्नुपरेको अवस्था छ ।
सबैभन्दा पहिला बन्द भएको मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा अन्तिममा सुरु हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र नै मनोरञ्जन क्षेत्र हो भन्दा फरक नपर्ला ।
अझ, नाटक क्षेत्रमा पनि कोरोनाले नराम्रो धक्का दिएको छ । पछिल्लो समय राम्रै दर्शक पाइरहेका नाटकहरूले पुन: दर्शक गुमाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता सुरु हुन थालेको छ । नाटक घरहरू बन्द भएको लामो समय भइसक्यो । कोरोनाको त्रासमा नाटक घरहरू खोलिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।
अब भने नाट्य क्षेत्रमा एक किसिमको बहस सुरु भएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने छलफल सुरु भइसकेको छ ।
नाट्यकर्मी/निर्देशक सुनिल पोखरेल कोरोनाका कारण नाट्य क्षेत्रले गतिलै घाटा व्यहोर्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको त प्रदर्शन नै रोकियो । त्यो रोकिएपछि त सबै कुरामा प्रभाव पर्ने भइहाल्यो ।’
नाटक क्षेत्रमा मात्रै आबद्ध भएका नाट्यकर्मीहरूलाई अहिले आर्थिक हिसाबमा पनि निकै कठिन अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । ‘नाटकबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने साथीहरूलाई त निकै गाह्रो अवस्था आएको छ’, सुनिलले थपे, ‘केही साथीहरू त गाउँ फर्किनुभयो । यहीँ रहनुभएकाहरूको अवस्थाचाहिँ नाजुक नै छ ।’
अहिले काम नपाएर फुर्सदिला बनेका नाट्यकर्मीहरूले तत्कालै आयस्रोतको विकल्प पनि भेट्न गाह्रो भएको सुनिलले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अहिले सबै क्षेत्र नै प्रभावित बनेको छ । त्यसैले तत्काल अर्को विकल्प खोज्न पनि गाह्रो छ । त्यसैले अबको केही समय नाट्यकर्मीहरूका लागि खराब समय रहनेछ ।’
अब अवस्था केही सामान्य बन्दै गाएकाले बन्द नाटकघरको विकल्प खोज्न सुरु भएको सुनिलले बताए । ‘अहिले हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छौँ । बन्द थिएटरमा भन्दा पनि बाहिर खुला रूपमा नाटक मञ्चन गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । त्यसको अभ्यास चलिरहेको छ’, सुनिलले योजना सुनाए ।
सुनिलको योजना जस्तै काम अर्का नाट्यकर्मी घिमिरे युवराजले गरिसकेका छन् । उनले २ वटा नाटकलाई खुला रूपमा मञ्चन गरिसकेका छन् ।
सरकारलाई खबरदारी गर्नका लागि पाटन क्षेत्रमा ‘हाच्छिउँ साच्छिउँ’ र ‘अभिभावकविहीन जनता’ नामक नाटक प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले गरेको गलत कामका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने भएकाले उच्च सावधानीका साथ पाटनमा नाटक मञ्चन गरिएको युवाराज बताउँछन् ।
अहिले नै थिएटरमा नाटक देखाउन सम्भव नै नभएको घिमिरेले बुझेका छन् । उनले भने, ‘दशैँसम्म त हामीले थिएटरमा नाटक देखाउने कुरालाई कल्पना नै नगरे हुन्छ । त्यसपछि भने अवस्था हेरेर नाटक घर सुरु गर्न सकिन्छ कि !’
दशैँपछिसम्म दर्शकमा पनि कोरोनाको डर हराउने र नाटक चल्दा दर्शकको राम्रो उपस्थिति रहन सक्ने युवराजको विश्वास छ । उनले थपे, ‘कोरोना अगाडि जति दर्शक आउनुभएको थियो, त्यही लेभलमा दर्शकको उपस्थिति हुन्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन । तर, नियमित नाटक हेर्ने नाटक प्रेमीहरू आउनुहुन्छ ।’
कोरोनाले नाट्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको आर्थिक क्षति पनि कम नभएको युवराज बताउँछन् । ‘थिएटरको भाडा तिर्ने कसरी भन्नेदेखि आफ्ना कलाकारहरूलाई पैसा दिनेसम्मको चिन्ता सञ्चालकहरूमा बढिरहेको छ’, युवराज भन्छन्, ‘त्यो घाटा व्यहोर्न त राम्रो पैसा चाहिन्छ ।’
यो सङ्कटका कारण कतिपय राम्रा कलाकारहरू पनि पलायन हुने भन्नेमा युवराजको चिन्ता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् युवराज ।
‘अहिले सडक नाटक तथा खुला मञ्चमा नाटक गर्नका लागि सरकारले केही सहयोग गरिदिए नाट्यकर्मी पनि बाँच्ने आधार हुने थियो’, सरकारसँग युवराज आशावादी देखिए ।
अर्का नाट्यकर्मी केदार श्रेष्ठ पनि कोरोनाका कारण सबैभन्दा घाटा व्यहोर्नुपरेको क्षेत्र नै नाट्य क्षेत्र भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नाटक भनेको समूहमा गर्ने काम हो, त्यो पनि समूहकै लागि प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गर्नुपर्ने काम । त्यसैले पनि नाटक क्षेत्रलाई कोरोनाले ठूलो असर पुर्‍याएको छ ।’
कोरोनाका कारण अहिले मञ्चन हुँदै आएको नाटकको संख्या र गुणात्मकतामा पनि असर गरेको केदारको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको सङ्कटअघि जुन किसिमले नाटकहरू प्रदर्शन भएका थिए, त्यो अब हुने अवस्था रहँदैन अनि जति धेरै नाटक मञ्चन भयो, त्यहीअनुरूप गुणात्मकता पनि बढ्ने हुन्थ्यो । त्यसमा पनि कोरोनाले असर पुर्‍यायो ।’
नाट्य क्षेत्रमा नै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था कहिल्यै पनि नभएको केदारको भनाइ छ । उनले भने, ‘नाटक मात्र गरेर पेट पाल्ने कलाकारहरू कमै हुनुहुन्थ्यो । तर, कलाकारिता मात्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई अहिलेको अवस्था निकै नाजुक छ । अब कतिपय कलाकारहरू पलायन हुने अवस्था देखिन्छ ।’
यति हुँदै गर्दा पनि नाटक घरको विकल्प नाटक घर नै भएको केदारको भनाइ छ । ‘हामीले बाहिर खुला चौरमा गएर नाटक देखाउँछौँ भन्ने अवस्था पनि छैन’, केदारले थपे, ‘किनभने त्यहाँ पनि त सामाजिक दूरीका कुराहरू आउने गर्छन् । त्यो मिलाउन गाह्रो कुरा हो ।’
नाटक प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनै पर्ने कुरा भएकाले यसलाई भर्चुअल गर्न पनि नसकिने केदार बताउँछन् । उनले थपे, ‘यदि हामीले नाटकलाई क्यामेराले खिचेर युट्युब वा अरू केही माध्यमबाट देखायौँ भने त त्यो फेरि नाटक रहेन नि त ! त्यसैले नाटक घरको विकल्प नाटक घर नै हो ।’
अहिले तत्काल दर्शक हलमा फर्किहाल्ने अवस्था पनि नभएको केदार बताउँछन् । ‘जबसम्म दर्शकले कोरोनाको सन्त्रास बिर्सिनुहुन्न, तबसम्म थिएटरमा आउन गाह्रो छ’, केदारले आफ्नो बुझाइ सुनाए ।
अहिले ‘पर्ख र हेर’को विकल्प नै नभएको केदारको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, २१ असार २०७७, ११:१३:००
टिकटकमा हिट गीत 'हेर यो मुटुमा'को अफिसियल भिडियो रिलिज
चलचित्र क्षेत्रमा गुटबन्दी: कसको टिममा कोको ?